ယောင်္ကျားလေးတွေလက်မတွဲသင့်သောမိန်းမ - Myanmar in Singapore
Posted by မနတ်သမီး on December 3, 2011 at 11:00pm
by Royal Angel on Saturday, December 3, 2011 at 10:33pm
၂..။မိမိထက်လှသူ ဘေးကများဖြတ်လျှောက်သွားသောအခါချစ်သူကောင်လေးကမသိမသာဖြစ်စေ၊သတိလက်လွတ်၍ သိသိသာသာကြီးဖြစ်စေ လိုက်လံငေးမောကြည့်မိသောအခါလူရှေ့သူရှေ့ မရှောင် ဆွဲဆိတ်ထုနှက်ရိုက်ပုတ်တတ်သောမိန်းမ..။(အရှက်ကွဲလိမ့်မည်..။ လူ့အခွင့်အရေးဆူံးရှုံးသွားသည်ဟုသင်မကြာခဏခံစားရလိမ့်မည်)
၃..။ နေရာဒေသမရွေး၊လူသူလေးပါးမရှောင်လွန်ကဲစွာ ချိုအီချွဲနွဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံတတ်သောမိန်းမ (အစပိုင်းကာလတွင်မတော့သင့်အတွက်သာယာကောင်းသာယာနာပျော်ဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်.။သို့သောကြာလေကြာလေ
(သင်ဘယ်လောက်ရှင်းပြရှင်းပြ ။ရှင်းလေရှုပ်လေဖြစ်ကာ သင်ပဲတိုင်ပတ် တစ်ပတ်ခုနှစ်ရက်ချော့ ရလိမ့်မည်)
( ဆက်လက်လက်တွဲပါက စကားရှုပ်တတ်သောသူမအတွက် သင်ရှေ့နေကောင်းကောင်း လိုအပ်လာပါလိမ့်မည်)
၆..။ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရန် ပွဲကြည့်ရန် Live show ပွဲတွေကြည့်ရန်ဝါသနာအလွန်ပါသော်လည်း စာဖတ်ရန်
(သင့်နံဘေးမှာရှိသောအမျိုးသမီးလေးသည် မည်မျှပင်ချောမောလှပနေစေကာမူ စာဖတ်နည်းသည့်အတွက် အပေါ်ယံရွှေမှုန်ကြဲအထဲကနောက်ချေးခံ အလှမျိုးသာဖြစ်လိမ့်မည်..။ )
တစ်နေ့တစ်နေ့မရိုးသောပြဿနာပေါင်းစုံအား သင့်စိတ်အခြေအနေကိုမမေး သူချည်းသာတစ်တွတ်တွတ်ပြောတတ်သောမိန်းမ
( အဓိပါယ်ကတော့ မျှဝေခံစားသည်ဟုမည်သော်လည်းမလိုအပ်သောကိစ္စတော်တော်များများကိုနေ့စဉ်ကြားလာရသော
၈..။ ဆေးလိပ်မသောက်ရ၊အရက်မသောက်ရ၊KTV မသွားရ၊CLUB မတက်ရ ဟုချုပ်ချယ်တားမြစ်သည်မှာမှန်သော်လည်း .ဘောလုံးပွဲမကြည့်ရ၊Game မကစားရ၊သူငယ်ချင်းများနှင့်မသွားမလာရဟုတားမြစ်တတ်သောမိန်းမ
နိုင်သူတစ်ယောက်မှမရှိဟုထင်ပါသည်..။ မလိုအပ်ပဲတားမြစ်ပိတ်ပင်သောကြောင့်သင့်စိတ် ထောင်ကျ သလိုခံစားလာရလိမ့်မည်)
၉..။ သင့် ညီမ. ၊ အမ ၊အမေအဒေါ်များနှင့်ပင်သွားလာစားသောက်သည်ကိုသိပါကသင့်ကိုရန်ရှာစိတ်ကောက်တတ်သောမိန်းမ။
သင်ပြောသမျှမအောင်မြင် လူအထင်သေးခံ ရဖွယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်)
ဝိုင်းဆဲခံရကိန်းရှိသည်ကိုသိသိနှင့်ရေးလိုက်ပါသည်..။ ရေးသူကျွန်မသည်မိန်းမဖြစ်ပါသည်..။ထိုထဲမှအချက်တော်တော်များများကျွန်မ မှာရှိပါသည် ဟုကြိူတင်ပြောပြ ပါရစေ..။ (အဆဲခံရတာသက်သာမလားလို့ကြိုတင်ဝန်ခံထားခြင်း)
Comment by နေလရောင် on August 10, 2012 at 12:21pm ဟားဟား .......ကောင်းလှချည်လား..................thank you.......မနတ်သမီး
Comment by Myatmin Htet on July 17, 2012 at 6:19am thank....that right............... Comment by paingsittlin on May 27, 2012 at 6:31pm ဟဟ
Comment by tuntunaung on April 3, 2012 at 5:19pm ဟီးဟီး
Comment by ဖြိုးလေး on December 16, 2011 at 12:41pm ဟီး ဟီး ဒါဆို ယူစရာ မိန်းမ မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်... တစ်ချက်ချက်ကတော့ ငြိနေတာကို...
အားလုံးကို လိုက်လျောနိုင်တဲ့ မိန်းမဆိုရင်တော့ တော်တော် သဘောထားကြီးရလိမ့်မယ်
ဟီး အဲ့ဒီလောက် သဘောထား မကြီးနိုင်တာတော့ ခက်တယ်....:P Comment by MIC on December 11, 2011 at 9:03pm အထက်ပါ အချက်များမှ ကင်းလွတ်သော မိန်းမ လောကကြီးမှာ မရှိပါ။ Comment by May Kyaw Shin on December 5, 2011 at 4:50pm "အဲဒီအချက်တွေရှိတဲ့ မိန်းမတွေကို ရှောင်ရမယ်ဆိုရင် လူပျိုကြီးဖြစ်ပြီ" - ဆိုတော့
အင်း-Mr.Moon တစ်ယောက်တာ့ -မဟုတ်မှလွဲရောပဲ- လူပျိုကြီး ဘဝရောက်နေရရှာပြီထင်ပါရဲ့ -- Comment by မနတ်သမီး on December 4, 2011 at 1:05pm :) ဟုတ်တယ် Mr.Moon ရေ... အဲဒါဆိုရင်တော့ ..ကောင်မလေးတွေကျွန်မကိုဝိုင်းဆဲလိမ့်မယ် .. ခုဟာက ကျွန်မ ကယောက်င်္ကျားလေးတွေအတွက်လို့သာခေါင်းစဉ်တတ်ပေမယ့် တကယ်တန်းရည်ရွယ်တာ မိန်းကလေးတွေအတွက်ပါ .. ကိုယ့်ချစ်သူကိုယ့်နားမှာကြာကြာရှိစေချင်ရင်..တစ်သက်လုံးရှိနေစေချင်ရင် အဓိကရှောင်စေချင်တာလေးတွေပါ..။ Comment by Khine Aung Win on December 4, 2011 at 2:27am Thanks for sharing မနတ်သမီး..... RSS